We She Me: နို့စာရေးမ
သမီးလေးကို နို့တိုက်တဲ့ အခါတိုင်း ဘယ်လောက် (မီလီ လီတာ) တိုက်ပြီးသွားပြီလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က မှတ်ထားပါတယ်။ ပြီး... ဒီနေ့ ဘယ်လောက် ရှိပြီဆိုတာ စားရင်းချုပ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူမက မှတ်ပါတယ်။ ပုလင်းနဲ့ တိုက်ရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် အမေနို့တိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာ ခက်ပါတယ်။ မိနစ် ဘယ်လောက်ဆို့တယ်၊ ဘယ်ဘက်ကနို့ကို ဘယ်လောက်စို့တယ် (နှစ်ဘက်က အထွက် မတူပါဘူး) ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး တွက်ပါတယ်။ အဲဒီလို မှတ်တဲ့ အခါ သူမက ပိုမှတ်ချင်ပါတယ် ဥပမာ ၁၀ မိနစ်ကို ၃၀ မီလီ၊ ကျွန်တော်က လျော့မှတ်ချင်ပါတယ် .. ၂၀ မီလီ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ လျော့မှတ်တဲ့ အတွက် ကလေးပိုစို့ရတယ်၊ သူမကလည်း လျော့နေရင် စိတ်ပူတတ်ပါတယ်။ အဲတော့ မှတ်တဲ့ အခါတိုင်း ကျွန်တော်ဆီက Approval ယူပါတယ် (တကယ်တော့ တိုင်ပင်တာပါ.. ကြားကောင်းအောင် ရေးတာ)။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ရုံးက ပြန်လာတိုင်း မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို ကြည်ပြီး နို့စာရင်းစစ်ပါတယ်။ ဒီနေ ဘယ်လောက်သောက်လဲ၊ အမေနို့က ဘယ်လောက်လဲ စသည်စသည်ပေါ့။ နည်းနေရင် `ဟင်..ဒီနေ နည်းနေပါလား´ ၊ `မနေ့က ဒီအချိန်ဆို ဘယ်လောက် ရှိပြီ´၊ `စံချိန် မမှီသေးဘူး´ ..အဲလို ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အမေက ကြည့်ပြီး သူမကို နို့စာရေးမတဲ့....ကျွန်တော့်ကို နို့စာရင်းစစ်တဲ့။ ရုံးက ပြန်လာရင်လည်း `စာရင်းစစ်တော့ ပြန်လာပြီ၊ ငါတို့တွေ စာရင်းလိမ်တင်ရအောင်...´တဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီအပတ်တော့ ဘယ်လောက်သောက်ရမယ်၊ အမေနို့က တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်ရှိရမယ် ဘယ်လို ဘယ်လို ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့သမ၀ါယမမှာ စာရင်းစစ်ဝင်တာ ကျနေတာပဲ။
| FLAGS: Baby , she , We
plsaw,s'pore - 5/19/07, 12:19 AM
Your post should be milk audit...not accountant. carry on man..hey how to add counter for my blog..
Andy Myint - 5/19/07, 2:28 AM
Yeah..audit is me. she is accountant. 8-)
Anonymous - 1/20/11, 2:37 PM
How to count for you?